Zvekutsvaga muLaptop muna 2022
Iko hakuna imwe yakanakisa laptop kune wese munhu. Ungada a Windows PC, Mac, a Chromebook, kana kunyange imwe neLinux. Unogona kuda komputa yakatetepa uye yakareruka ine hupenyu hwebhatiri hwakanakisa, kana ungangoda tangi rine simba remuchina une chiratidziro chikuru kana mifananidzo yakanaka kwazvo yekutamba mitambo.
Hazvisizvo zvese zvaungada kufunga nezvazvo. Unoda touchscreen? Iwe unoda here 2-in-1 laptop inogona kushandiswawo sepiritsi? Iwe unogona kungoda kuchengetedza imwe mari, kana iwe ungangoda kushandisa yekuwedzera kune yeprimiyamu mudziyo une simba hardware.
Asi, kunyangwe iwe uchinyatsoziva zvaunoda mulaptop, kusarudza laptop kunogona kunetsa. Kune akawanda akasiyana mamodheru, uye yega yega inogadzira laptop inokurumidza kukuudza hardware yayo yakakunakira.
Unotangira papi? Isu tiripano kuti tikupei edu epamusoro mapikicha ekuita yako yekutenga nzira nekukurumidza uye isina kuoma sezvinobvira.
Cherechedza: Zvose Windows laptops isu tinokurudzira pano chero ngarava nayo Windows 11 kana kuti vanokwanisa kuisimudzira mahara.
Yakanakisa Laptop Yakazara: Dell XPS 13
✓ Hunhu hwakanaka hwekuvaka
✓ Hupenyu hwebhatiri refu
✓ Kushanda kwePC yakasimba
✓ Zvinoshamisa customizable
✗ Premium mutengo
✗ Yakabatanidzwa magiraidhi zvinoreva kuti iyi haisi yemitambo system
✗ Haasi munhu wese anoda Windows
The Dell XPS 13 yakanakisa-yakatenderedza PC laptop. Dai taifanira kukurudzira imwe chete yakanaka Windows Laptop - uye zvakaoma kusarudza imwe chete - iyi ndiyo laptop yatingakurudzira kune vanhu vazhinji. Iyo yazvino XPS modhi zvakare inotakura ne Windows 11.
Iyo XPS 13 ndeye 13-inch laptop, inova ndiyo inonyanya kufarirwa saizi nechikonzero. Pa 13 inches, uri kuwana yakakura laptop ine full-size keyboard, asi zvakare ine huremu, compact, uye inotakurika. Ehe, vamwe vanhu vanozoda malaptop akakura. 15-inch saizi yakakurumbira kana iwe uchida kukwira kumusoro, uye Dell anopawo 15-inch vhezheni yelaptop iyi.
Dell anogara achigadziridza iyo XPS 13 yakatevedzana neazvino Intel processors uye kumwe kuvandudzwa kwedhizaini, uye kuburitswa kwega kwega kuri nani pane kwekupedzisira. Ehe, iwe unogona kugadzirisa iyo Intel processor yaunowana, pamwe neCPU, ndangariro, uye SSD.
Iwe unoda XPS 13 ine touch screen? Iwe unoda yakanaka 4K skrini, kana ungada kuve ne1920 × 1200 skrini uye hupenyu hwakareba hwebhatiri? Dell anopa zvakawanda sarudzo.
Iyo XPS 13 yakatetepa uye yakareruka pa 0.58 inches gobvu uye inotangira pa 2.64 pounds isina touch screen. Iyo ine yakanaka yekuvaka mhando ine keyboard inonzwa kunaka kutaipa uye yakatsetseka yekubata bata. Dell anovimbisa kusvika maawa gumi nemana ehupenyu hwebhatiri uchiridza vhidhiyo, kunyangwe zvichisiyana zvichienderana nezvauri kuita-uye iwe unowana hushoma hupenyu hwebhatiri kana ukasarudza kuratidzwa kwe14K uye/kana touchscreen.
Kusiyana nemalaptops akajairwa, Dell anoshandisa 16:10 kuratidza panzvimbo ye16: 9 kuratidza. Izvi zvinoreva kuti chiratidziro chelaptop chakareba zvishoma, zvichikupa kamuri yakatwasuka pachiratidziro chako. Iyo zvakare InfinityEdge inoratidzira ine madiki bezels akatenderedza skrini.
Makore apfuura, mavhezheni ekare eiyo XPS 13 dhizaini yaive ne "mhino cam" yakatarisa kumusoro kubva pazasi pechidzitiro chako, asi yemazuva ano XPS 13 laptops ine webcam yakamira zvakanaka pamusoro pechidzitiro. Iyo webcam inototsigira Windows Mhoro, saka unogona kupinda nechiso chako.
Iyo yakanyanya kudzika kuDell XPS 13 laptops ndeyekuti ivo vanouya neyakasanganiswa Intel mifananidzo. Kana iwe uchitsvaga yekutamba laptop ine GPU ine simba-kana kana iwe uchida GPU yekugadzirisa vhidhiyo, kupa, kana imwe nyanzvi yemifananidzo maapplication-iwe uchada kutarisa yedu. mutambo welaptop pick panzvimbo.
Ehe, iyi iri Windows Laptop, saka kana uri Mac munhu, unenge uchida kutsvaga yakanakisa MacBook. Kana iwe uri Linux fan, zvakadaro, une rombo rakanaka! Dell anopa vhezheni yePC iyi inouya neLinux.
Yakanakisa Laptop Yese
Unoda laptop inoita zvese here? Iwe uchada iyo Dell XPS 13. Iyi ilaptop yakasimba ine hupenyu hwebhatiri hombe, saka chero iwe uchinge uchinge uine Windows, iyi ndiyo nzira yekuenda nayo.
Yakanakisa Budget Laptop: Acer Swift 3
✓ Iyo inoshamisa hardware package
✓ Kuita kwakanakisa
✓ Kukosha kukuru
✓ Zvakanyanya, iyi yakawanda yehardware yemhando yemitengo
✗ Kupera kwepamusoro kwebhajeti
✗ Vaka mhando uye hupenyu hwebhatiri hunogona kuve nani
Hapana anoda kushandisa mari yakawanda kupfuura yaanofanira kuita. Paunenge uchitenga laptop ine mutengo wakaderera, iwe unofanirwa kufunga nezve tradeoffs yauri kugadzira. Kana wapedza kushandisa zvishoma, ndipo paunowedzerawo kukanganisa.
Isu tiri mafani e Acer Swift 3 kana uri pabhajeti. Inowanzo kuwanikwa nemari inodarika mazana matanhatu emadhora, ingaite seinodhura, asi uri kuwana zvaunobhadharira. Iyo Swift 600 ine 3-inch 14p skrini, inokurumidza AMD Ryzen 1080 sere-core processor ine Radeon graphics, 7 GB ye RAM, 8GB yekukurumidza. NVMe kuchengetedza, Wi-Fi 6, uye chiverengero chemunwe. Ndiwo huwandu hunoshamisa hwehudhivha hune simba mune yepakati-renji laptop pasuru pamutengo uyu. Iyo keyboard uye touchpad inoshanda nemazvo, futi.
Asi ndeipi yakanakisa laptop pasi pemadhora mazana mashanu, iwe ungabvunza? Zvakanaka, chekutanga tinokukurudzira kukwidza bhajeti yako zvishoma. Mazhinji maPC akasimba, seAcer Swift 500, anowanikwa mumadhora mazana mashanu nemakumi mashanu kusvika kumadhora mazana matanhatu nemakumi mashanu. Iwe unozopedzisira wawana laptop iyo iwe yauchazofara zvakanyanya nayo kwenguva yakareba.
Kana iwe usingakwanise kuenda ingangoita madhora mazana mashanu, saka isu tinokurudzira kuti usatore PC, asi Chromebook. The Lenovo Chromebook Flex 5 yakanakisa Chromebook pane chero mutengo renji-kunyangwe yedu yatinoda Chromebook iri kudhura zvishoma-nekukurumidza kuita, hupenyu hwakasimba hwebhatiri, uye yakanaka keyboard uye trackpad. Hauchafaniri kubata nazvo Windows, kana.
Asi ungaenda zvakachipa zvakadii? Zvakanaka, pane komputa inonzi the HP Bhuroka 11. Zviri pakati zvakachipa Windows malaptop unogona kutenga nemari inodarika $200 chete. Nekudaro, ine inononoka Intel Celeron CPU, ingori 4 GB ye RAM, uye inononoka (uye idiki) 32GB. eMMC kuchengetedza. Pa 11 inches, idiki pane 13-inch laptops vanhu vazhinji vangave vakagadzikana nazvo. Ndizvo zvakawanda zvekubvumirana, uye hatingazvikurudzire kuvanhu vazhinji.
Iwe unozofanirwa kutora muchina unoita zvine musoro kwauri pamutengo wako-asi isu tinofunga kuti uchafadzwa neAcer Swift 3 sePC laptop. Iyo bhajeti asi haina zvakawanda zvinokanganisa.
Yakanakisa Budget Laptop
Unoda laptop nyowani asi pane bhajeti? Iyo Acer Swift 3 ndeye yakasimba hardware package pasina kutyora bhangi.
Yakanakisa Gaming Laptop: Asus ROG Zefirus G15
✓ Inopisa inokurumidza kuita mutambo
✓ Yakanaka skrini
✓ Zvinotakurika zvinoshamisa
✗ Tsvimbo imwe yeRAM inotengeswa
✗ Hapana yakavakirwa-mukati webcam
✗ Desktop yemitambo inogara ichipa mamwe maitiro padhora
Desktop yemitambo inogara iine simba kupfuura laptop yekutamba, asi unogona kushamiswa nemasimba ekutamba malaptops ave nesimba. Iwe unogona zvakare kushamiswa nekutaridzika kwavanoita kwakapfava zvichienzaniswa nematangi ekugadzira matanda emakore mashoma apfuura.
The Asus ROG Zefirus G15 imwe yakadaro yemitambo laptop. Iyo inobatanidza yakakwira-yekupedzisira AMD CPU ine inoshamisa ine simba NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU nokuda kwekukasira-kukurumidza kuita. Iyo base modhi inouya ne16GB ye RAM uye 512GB yekuchengetedza SSD.
Iyi 15-inch laptop's skrini yakanaka. Haisi kuratidzwa kwe4K, asi iQHD-nemamwe mazwi, 2560 × 1440 resolution. Iyo ine inokurumidza 165Hz yekumutsiridza mwero, zvakare.
Iwe haufanire kuda 4K mulaptop yemitambo, zvakadaro. Zvinotora mamwe graphical horsepower kupa mitambo pa4K skrini, saka nhare yeGPU ingave nedambudziko rakawanda kuendesa yakakwira FPS (mafuremu pasekondi) pamhando yepamusoro yemifananidzo mumitambo yazvino.
Mune mamwe mazwi, uri nani pakumhanyisa mutambo une yakakwirira graphical marongero pane yakaderera-resolution kuratidza pane yakaderera graphical marongero pane yepamusoro-resolution 4K kuratidza.
Zvisinei nesimba irori, iyi 15-inch laptop inozvirumbidza yemazuva ese ebhatiri kana usiri kutamba. Inorema makirogiramu mana, saka haufanirwe kurega kutakurika.
Iyo ROG Zephyrus G15 inotyisa kukosha kwemari. Izvo zviri kutaurwa, imwe ye RAM module inotengeswa kubhodhi reamai, izvo zvinokutadzisa iwe kusimudzira RAM mune iyo slot mune ramangwana.
Laptop iyi zvakare haina yakavakirwa-mukati webcam, asi unogona kugara uchishandisa yekunze webcam, uye ine chiverengero chezvigunwe.
Yakanakisa Yemitambo Laptop
Asus ROG Zefirus G15
Nepo ma desktops achiwanzo kuve nani pakutamba, kana iwe uchida yemitambo laptop, haugone kurova iyo Asus ROG mutsara. Iyi yakapfava, yakareruka yekutamba laptop iyo inokodzera zvese zvaunoda zvemitambo.
Yakanakisa Laptop yeVadzidzi: HP Mhanje 13
✓ Zvirongwa zvakawanda
✓ Kukosha kwemari
✗ Kwete premium laptop
✗ Kwete iyo yakachipa laptop, kana
Kune vadzidzi vekoreji vanoda ine simba asi inotakurika sisitimu ine hupenyu hwakareba hwebhatiri nemutengo wakaderera zvakanyanya kupfuura iwo wedu yakanakisa laptop yakazara, tinokurudzira iyo HP Mhanje 13.
Magadzirirwo akawanda anowanikwa eHP Envy 13, kunyangwe mazhinji achiuya ne8GB RAM-inopa rinopfuura simba rakakwana rekuita zvakawanda panguva yekutsvagisa-yakanyanya chirongwa kana basa reboka. Iwe zvakare uchabatwa kune yakajairwa SSD inobatsira kuderedza nguva yekuremerwa uye kuchengetedza zvese zvichifamba zvakanaka.
Kana iwe uri kutora chero chaiyo kosi yekudzidzira, unogona kushandisa yakavakirwa-mukati 720p kamera ine mbiri-yakarongwa maikorofoni. Izvo hazvisi kuzopa mifananidzo yakajeka senge yakamira webcam, asi yekamera pane izvo zvinozove bhajeti relaptop, ichaita kuti basa riitwe.
Zvichienderana nebasa rako, iyo HP Envy 13 ichakuwana iwe maawa angangoita gumi nerimwe ehupenyu hwebhatiri usati wada kuchajazve. Izvi zvinoreva kuti haufanirwe kupinda mumatambudziko kana ukakanganwa charger yako paunenge uchimhanya kuenda kukirasi mangwanani.
Pakazere, iyo HP Envy 13 pasuru yakasimba ine kuita kwakanaka kweyero yemutengo. Haisi se "premium" mukuvaka mhando kana Hardware semamwe edu akawanda mapikicha, asi mazana emadhora akachipa uye achiri kutarisa mazhinji emabhokisi anodiwa nevadzidzi.
Zvese zviri kutaurwa, zvakawoma kuita zvisizvo nemamwe akawanda emamwe malaptop pano ekoreji, kana. Pamwe unoda imwe premium laptop pasina kubata uye peni yekupinza, a Chromebook, kana beefier PC laptop iwe unogona kutamba mitambo pairi.
Kana iwe uchida Mac, iyo quintessential Mac yekoreji ndiyo MacBook Air. Vadzidzi vanogona kuchengetedza $100 paMacBook ne Mitengo yedzidzo yeApple. Kana, kune chimwe chinhu chakakosha, tarisa sarudzo yedu ye yakanakisa MacBook. Vadzidzi vanogona kuchengetedza pairi, zvakare.
Yakanakisa Laptop yeVadzidzi
HP Mhanje 13
Iyo spec sheet haisi kuzotyora chero marekodhi, asi iyo HP Envy 13 inopa kuita kwakavimbika pamutengo unonzwisisika. Vadzidzi vakanyoresa mumakirasi ari kure vanozoda inoshamisa yakavakirwa-mukati webcam, uye iyo slim profiles inoita kuti zvive nyore kurongedza uye kuenda kune chero pa-campus hurukuro.
Yakanakisa 2-in-1 Laptop: HP Spectre x360 13
✓ Laptop yakanaka pamoyo
✓ Kubata kwakanaka uye peni kupinza
✓ Sarudzo dzemavara akasiyana
✗ Kwete iyo yakachipa
✗ Screen haibatike, sekune mamwe 2-in-1s
HP's Specter x360 13 yakanakisa 2-mu-1 PC. Iyo yakanakisa laptop mukati uye pachayo, uye inokutendera iwe kuitenderedza 360 madhigirii kuti ishande sehwendefa. Iyo Specter ine touch screen uye inosanganisirwa stylus kuti iwe ugone kunyora pachiratidziro, futi. Sezvakaita wedu yakanakisa laptop yakazara sarudza, iyi 14-inch laptop ine 3: 2 kuratidza saka iwe unogona kuona zvimwe zvirimo pachiratidziro panguva.
Iwo madhizaini akasimba, ane ine simba Intel Core i5 kana i7 CPU, yakakura-yemazuva ese bhatiri hupenyu, uye hombe keyboard zvese zvakapihwa.
Iyo HP Specter x360 zvakare ine yakanakisa kuvaka mhando. Kusiyana neavhareji laptop, inopa imwe yakashongedzwa, yakasarudzika mavara sarudzo iyo inoibatsira kumira kunze mumunda wakazara vanhu. Sarudza kubva Natural Silver, Nightfall Black, kana Poseidon Blue, uye ita kuti laptop yako ibude pachena.
Kana iwe uchida 2-in-1, HP yaita basa rakanaka rekubatanidza premium ultraportable laptop ine piritsi maficha uye yakasarudzika dhizaini mutauro kugadzira inomira sisitimu.
Ehe, vamwe vanhu vangade rudzi rwe2-in-1 ine keyboard inobviswa. Kana iwe uchitsvaga izvo, isu tinokurudzira Microsoft's Surface mutsara, kubva kune isingadhure Kupfuura Go 2 ku Surface Pro 7 nzira yese kune premium Surface Book 3.
Nekudaro, parutivi kubva kuSurface Book, zvishandiso izvi zvinonzwa zviri padyo nemapiritsi ane keyboard mavhavha pane 2-in-1 laptops. Zvinoenderana nezvauri kuenda, chaizvo!
Yakanakisa 2-in-1 Laptop
Iyo Specter inoshanda senge chero yakanaka laptop ingangoita, uye ipapo unogona kuitenderedza ichitenderedza zvachose pamahinji ayo uye woishandisa sepiritsi (ine inosanganisirwa peni). Ndiyo yakanakisisa yenyika dzose!
Yakanakisa Laptop yeVhidhiyo uye Mufananidzo Kugadziriswa: MacBook Pro (14-Inch, M1 Pro)
✓ Liquid Retina XDR kuratidza
✓ Premium Apple kuvaka-mhando
Apple's MacBook Pro yagara iri imwe yesarudzo dzepamusoro kune nyanzvi dzemifananidzo, vatori vemifananidzo, uye dzimwe nyanzvi dzekugadzira. Kana software yaunoshandisa ichishanda paMac, zvino izvi 14-inch MacBook Pro (inofambiswa neM1 Pro) isarudzo yakanaka.
Iyo M1 Pro chipset ndicho chikonzero chikuru ichi MacBook Pro modhi iri kurudziro iri nyore yekugadzirisa nyanzvi, sezvo yayo 8-musimboti CPU uye 14-musimboti GPU ichabhururuka kuburikidza chero basa raunokanda pairi. Iwe unogona kunge uchitochengeta mafaera pane yekunze drive, asi Apple yakapa iyi modhi 512GB SSD-saka iwe unogona kuchengetedza yakawanda data pairi mupini.
Mifananidzo nemavhidhiyo zvinotaridzika zvakapinza pane yayo Liquid Retina XDR kuratidza, iyo inopa yakakura simba renji uye musiyano reshiyo. Hazvina mhosva kuti chidzitiro chakavharwa sei nematabu akavhurika uye maapplication, 16GB RAM inofanirwawo kuchengetedza zvinhu zvichifamba zvakanaka.
Kutenderedza pasuru iyi seti yakasimba yevatauri (kusanganisira kudzika-kanzura mawoofer), 1080p FaceTime HD kamera, bhatiri rinokwira kusvika maawa gumi nemanomwe pa charger imwechete, uye MagSafe charger. Iwe uchabhadhara peni rakanaka kune yese tech, zvisinei, sezvo MacBook Pro ichivharira mukati pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu.
Kana uchida a Windows PC ine hombe skrini yemifananidzo uye vhidhiyo kugadzirisa, funga nezvedu yakanakisa 15-inch laptop pachinzvimbo. Kana, kana iwe uchida ane simba discrete graphics hardware, funga laptop yemitambo.
Yakanakisa Laptop Yekugadzirisa
Iyo MacBook Pro inoratidzira ine simba M1 Pro chip, inoyevedza Liquid Retina XDR kuratidzwa, uye yakawanda premium inopera.
Yakanakisa Laptop yeBhizinesi: Lenovo FungaPad X1 Carbon Gen 9
✓ Hardware ine simba uye hupenyu hurefu hwebhatiri
✓ Inogara uye isingaremi
✓ Optional cellular yekubatanidza
✗ Hapana discrete GPU, saka haisi iyo yakanyanya kunaka yemitambo
✗ Vamwe vanhu vanozoda MacBook
Inenge chero laptop inogona kuve yakanaka kune bhizinesi, asi ThinkPad ndiyo yakasarudzika mutsara webhizinesi laptops nechikonzero. Kubva pakusimba-kwakaedzwa kusimba kune akasiyana madoko uye sarudzo yekubatanidza cellular, iyi mutsara wemalaptops unomira pachena.
Ne 14-inch Thinkpad X1 Carbon Gen 9, Lenovo yakagadzira mutsara wekutanga webhizinesi FungaPads. Pa2.49 pounds, yakatoreruka kupfuura yedu yatinofarira yakazara laptop ichiri yakasimba nekuda kwekushandisa lightweight kabhoni fiber. Lenovo anoti ThinkPads inoedzwa kupokana mauto-giredhi zvinodiwa kuve nechokwadi kuti vanomhanya mumamiriro akanyanya.
Uyu ndiye Dell XPS 13, asi zviri nani-uye, zvechokwadi, zvinodhura. Iyo ine 16:10 kuratidzwa kune yakawedzera vertical screen real estate, iyo yakanakira kugadzirwa. Iwe unowana huru Hardware seyegumi neimwe chizvarwa Intel Core i11 processor uye akasiyana madoko, kusanganisira echinyakare USB-A uye yakazara-saizi HDMI ports, saka unogona kubatanidza chero mudziyo waunoda kubatanidza. Mazhinji e-ultraportable laptops anosvetuka pamachiteshi, achikumanikidza kuti uvimbe nemadongles, saka ichi chinhu chikuru kupfuura chaungatarisira!
Uye, chokwadi, muchina uyu une yekare tsvuku "TrackPoint" nub yaunogona kushandisa kudzora mbeva yako kubva pakati pekhibhodi yako. Iyo ThinkPad, shure kwezvose!
Unogona kusarudza kuwana 4G LTE/5G modem yakavakirwa-mukati, ichipa laptop yako internet yekubatanidza chero kwaunogona kuwana nharembozha. Ndicho chimwe chezvinhu chinoita kuti rudzi urwu rwemuchina ive yakanakisa laptop yebasa-inogara-painternet yekubatanidza kuti usanetsekane nekutsvaga Wi-Fi.
Kana iyi laptop ichiita seyakanyanya kudhura kwauri, yedu yekusarudza yakanakisa laptop yakazara ihombe, ultraportable bhizinesi laptop zvakare. Uye zvechokwadi, kana iwe uchida Mac, nyatso funga yedu yepamusoro MacBook.
Yakanakisa Laptop yeBhizinesi
FungaPad X1 Carbon Gen 9
ThinkPads malaptops anozivikanwa ekugadzira, uye haugone kutadza neiyi yazvino modhi. Yakasimba uye yakareruka, zvichiita kuti zvive nyore kushanda zvisinei kuti uri kupi.
Yakanakisa Laptop Yevana: Lenovo Chromebook duet
✓ 2-in-1 ine touchscreen
✓ Kwete Windows kukonzera matambudziko
✗ Kuita kwakaderera
The Lenovo Chromebook duet ilaptop yakanaka yevana. IChromebook, saka uri kuwana yakareruka sisitimu yekushandisa-mwana haafanire kubata nekuoma kwe Windows.
Nepasi pemadhora mazana matatu, uri kuwana inokwanisa 300-in-2 mudziyo une touch screen. Mwana anogona kuishandisa sepiritsi kana laptop odzokera nekudzoka. Pamaawa gumi ehupenyu hwebhatiri, uri kuwana yakawanda yenguva yekumhanya usati warovera muchina uyu mukati, zvakare. Kufanana neakawanda emalaptops edu atinoda, inotove ine 1:10 aspect ratio pachinzvimbo cheyakajairwa 16: 10 chikamu ratio.
Iyo Duet iri padivi diki relaptop pa10.1 inches, saizi yakajairika yehwendefa. Iyo diki-kupfuura-yakajairika keyboard inogona kunge isinganetseke kumwana, uye saizi diki inogona kuita kuti sisitimu ive nyore kushandisa, kunyanya sehwendefa. Kusiyana nemamwe makomputa anotendeuka, inouya nekhibhodi uye haiite kuti utenge iyo yakaparadzana.
Ehe, zvibayiro zvinofanirwa kuitwa kurova izvi pasi pemadhora mazana matatu emutengo. Iyi sisitimu ine yakaderera-yekupedzisira processor (a MediaTek ARM chip), saka haisi kuzokwikwidza nemalaptops ane yepamusoro-yekupedzisira Intel CPUs, kunyanya kana uchiita yakawanda multitasking.
Kana uri kutsvaga a Windows PC sarudzo, funga nezve Microsoft Kupfuura Go 2. Iyo 10.5-inch 2-in-1 laptop inotangira pamadhora mazana mana-asi iyo keyboard inozowedzera iwe. Iwe unowana Intel CPU, asi inononoka Core M CPU. Ingo usatarisira kuita kwakawanda kweiyo yepamusoro-yekupedzisira Intel laptop.
Yakanakisa Laptop Yevana
Kana iwe uchitsvaga tekinoroji yevana, zvakakosha kuti ive nyore kushandisa uye yakasimba. Iyo Chromebook Duet zvese, uye Chrome OS inotora zvimwe zveWindow's oddities kunze kweiyo equation.
Yakanyanya Kubata Screen Laptop: Microsoft Surface Laptop 4
✓ Mamodheru ese anosanganisira touch screens
✓ Yakakura touchpad, zvakare
✗ Kwete inoshandurwa 2-mu-1
✗ Haikwanise kushandisa zviri pamutemo maapplication eAroid kusvika Windows 11
Mazhinji malaptops ane touch screens mazuva ano-asi kwete nguva dzose nekusarudzika. Somuenzaniso, zvatinoda zvachose laptop inowanikwa ne touch screen, asi base modhi haisanganisire imwe.
Nepo iwe uchigona kuwana akawanda makuru malaptop ane touch screens, isu tinoda Microsoft's Surface Laptop 4. Ese eSurface Laptop modhi anosanganisira yekubata sikirini, saka hausi kufungidzira kana modhi yako ine imwe.
Inotsigira gumi-point yekubata yekupinda (saka iwe unogona kushandisa zvigunwe zvako zvese kamwechete), uye iwe unogona zvakare kudhirowa pairi ne Microsoft Pamusoro Peni. Kusiyana nemimwe michina yakawanda yeSurface, iyi ndiyo yakajairwa laptop fomu chinhu, saka hainzwe kunge piritsi.
Sezvo ese mamodheru aine touch screen, haufanirwe kupira hupenyu hwebhatiri, sezvaungaite nemamwe malaptop. Iyo yekutanga modhi ine AMD Ryzen 5 processor inozvirumbidza kusvika kumaawa gumi nemapfumbamwe ehupenyu hwebhatiri, nepo maIntel modhi achiwana maawa mashoma.
Microsoft's Surface Laptop 4 inosanganisirawo yakanakisa touchpad yekufambisa mbeva yako cursor pamwe neyakagadzika keyboard. Iyi ingori yakasimba, yese-yakapoteredza laptop. (Kana iwe uchida imwe ye "inoshandurika piritsi ine keyboard kavha" chiitiko, iyo Surface Pro 7 zvakare komputa yakanaka.)
Kana iwe uchitsvaga 2-in-1 system inogona kushandura kuita yakawanda yelaptop fomu chinhu, funga yedu yatinofarira 2-in-1. Kana iwe uchida laptop inoshandisa Android apps, ichi chinhu chiri yave kuwanikwa mu Windows 11. Iyo itsva inoshanda sisitimu yakafanorongedzerwa paSurface Laptop 4, saka hauchadi kuti uwane Chromebook kuti unakirwe neaya maapplication palaptop.
Yakanakisa Bata Screen Laptop
Yepamusoro Laptop 4
Kana iwe uchida laptop ine touch screen isiri 2-in-1, iyo Surface Laptop 4 ndiyo yako yakanyanya sarudzo. Nemamodheru ese ane touch screen uye hupenyu hurefu hwebhatiri, iyi isarudzo yakasimba.
Yakanakisa 15-inch Laptop: Dell XPS 15
✓ Mazhinji XPS gumi nematatu maficha mune 13-inch package
✓ Yakanakisa kuvaka mhando
✓ Inenge bezel-isina kuratidza
✗ Haishande pamwe chete nelaptop yemitambo
✗ Mutengo wacho une premium
Dell anogadzira hombe 13-inch laptop, uye kambani inogadzirawo hombe 15-inch laptop. The Dell XPS 15 yakasimba, yazvino sisitimu inotora akawanda eDell XPS 13's makuru maficha, anosanganisira sikirini ine 16:10 aspect ratio, kiibhodhi hombe, uye yakanakisa girazi touchpad. Iwe zvakare unowana kamera inogona kusaina iwe nayo Windows Mhoro uye muverengi wemafingerprint.
Kufanana neDell XPS 13, iyo Dell XPS 15 yemitambo ingangoita bezel-isina InfinityEdge kuratidza. Pa 15.6 inches, iwe unowana yakakura kuratidza kupfuura yako avhareji 13-inch laptop. Nekudaro, ichiri kutakurika zvakanyanya, kutanga pa3.99 lbs yeiyo base modhi. Hupenyu hwebhatiri hunosiyana zvichienderana nekuti ndeupi modhi yaunosarudza sehukuru hwakasiyana hwebhatiri uye zvikamu zviripo, asi iwe unofanirwa kuwana hupenyu hwemazuva ese hwebhatiri kure nemagetsi.
Iwe unogona chaizvo kushandisa shoma kune 15-inch laptop uye tora yepakati-renji kana bhajeti system, asi iwe hautore chidimbu chehardware ichi chakanaka.
Kana iwe uchitsvaga yekutamba laptop, tarisa yedu yemitambo laptop inosarudza pachinzvimbo. Kuenzaniswa neyedu yatinofarira yemitambo laptop, base Dell XPS 15 ine Intel yakabatanidzwa magiraidhi i $600 yakachipa. Kana iwe uchida hombe laptop isina kuridza mhere-yekukurumidza kuita mutambo, iyi yakasimba sisitimu ine yakakura yekuvaka mhando.
Kana iwe uri Mac fan, zvisinei, iwe unofanirwa kutarisa Apple's MacBook Pro pachinzvimbo. Ehe, ese MacBook uye yemitambo laptop inodhura zvakanyanya kupfuura iyi system.
Yakanakisa 15-inch Laptop
Unoda chimwe chinhu chihombe pane chakajairwa 13-inch laptop? Iyo Dell XPS 15 ishanduro hombe yesarudzo yedu yese yepamusoro.
Yakanakisa MacBook: MacBook Pro 14-inch (M1)
✓ Nyowani M1 Apple Silicon chip ine inoshanda kutonhora
✓ Hupenyu hwebhatiri hwemaawa gumi nemanomwe
✓ Zvimwe zvinhu kupfuura MacBook Air
✗ Yakakora uye inorema kupfuura iyo MacBook Mhepo
Inowanikwa ne M1 chipset, iyo MacBook Pro 14-inch ndeimwe yemalaptops anokwanisa kwazvo pamusika. Iyo ine zvese zvaunoda kubva pakuona kwekubatanidza (kusanganisira MagSafe zvinongedzo, HDMI chiteshi, uye SD kadhi slot), ukuwo uchiunza yakapfava mbiri uye yekutanga Apple kuvaka mhando.
Iyo M1 chip ine blistering inokurumidza 8-musimboti CPU uye gumi nemana-musimboti GPU, ichiita kuti icheke kuburikidza neinoda mabasa ekugadzirisa vhidhiyo zviri nyore. Zvisinei nepurojekiti yauri kushanda pairi, inotaridzika zvakanaka paMacBook's Liquid Retina XDR kuratidza.
Iwe zvakare unozosimuka kusvika kumaawa gumi nemanomwe ekushandisa pamutengo mumwe chete, kunyangwe izvo zvinogona kusiyana zvakapusa zvichienderana nekuti basa rako ririkuda sei. Nekudaro, iwe unofanirwa kukwanisa kuzviita mukati mezuva rakazara usati watombofunga nezve kwaungawane iri pedyo yekubuda.
Iyo chete yekudzosera kuMacBook Pro 14-inch mutengo wayo weti. Iyo 512GB modhi yakanyorwa pamadhora zviuru zviviri uye kukwira kune iyo 2,000TB modhi kunounza iyo kumadhora zviuru zviviri nemazana mashanu. Kubheja kwako kwakanyanya kumirira kuti laptop iende kutengeswa, sezvo vatengesi vanofarira kumhanyisa zvidzikisiro zvine rupo pamutsara gore rese.
Kunyangwe nemutengo wayo wepamusoro, iyo MacBook Pro 14-inch ichiri chigadzirwa chakakosha kufunga. Hardware yayo ine ramangwana-humbowo, dhizaini yayo yakapfava uye haina nguva, uye hapana kuramba kukwezva kwechigadzirwa chekutanga Apple.
Inopihwa simba neM1 chip uye ichizvitutumadza Liquid Retina XDR kuratidzwa, pane zvishoma pamusika zvinogona kukwikwidza neApple's premium laptop.
Yakanakisa Chromebook: Acer Chromebook Spin 713
✓ Hombe, yakanaka yekubata sikirini
✓ Solid kuvaka mhando
✓ 2-in-1 laptop ine Android apps
✗ Hupenyu hushoma hwebhatiri pane yakaderera-yekupedzisira Chromebook
✗ Yepamusoro-yekupedzisira yeChromebook
Asus akaunza yakanaka system ine 2021 vhezheni ye Chromebook Spin 713. Inogona kunge inodhura yeChromebook, asi imari inofananidzwa nayo shoma Windows Laptops-uye iyi yakanyanya premium laptop pasi kune yakasimba keyboard uye touchpad.
Iyi Chromebook yakazara nezvinhu zvemazuva ano. Iwe uri kuwana 11th-chizvarwa Intel Core processor (kana iwe unogona kusarudza iyo i5 kana i7). Iyo USB-C ports inotsigira Thunderbolt 4 yekukurumidza peripherals. Kuchengetera kwemukati kunotanga pa256 GB.
Iri mukirasi rakasiyana rekuita richienzaniswa nebhajeti Chromebook. Hupenyu hwebhatiri zvakare huchadzikira pane pane isina simba Chromebook, hongu.
Iyo skrini yakanaka pa2256 × 1504 pixels. Izvi zvinoreva kuti i3: 2 skrini, saka ine yakatonyanya kutwa nzvimbo kupfuura iyo 16:10 skrini pane yedu yatinoda. Windows laptops pano. Iyi Chromebook ine yekubata sikirini, uye iyo "spin" muzita rehurongwa ipfungwa: Iyi i2-in-1 inoshandurwa. Kusiyana a Windows 10 PC, unogona kuisa mapurogiramu eAroid paChromebook uye woishandisa zvinobudirira sehwendefa reAndroid-kana kungoshandisa mapurogiramu eAroid padivi peChrome.
Iwe haufanirwe kushandisa yakawanda iyi paChromebook, zvisinei. Takasarudza mamwe maChromebook akanaka se yakanakisa laptop pasi pemadhora mazana mashanu uye yedu yatinoda laptop yevana. Asi, kana iwe uchida kushandisa yakawanda iyi, iwe uchave uine yakakura Chrome OS chiitiko.
Iyo Acer Chromebook Spin ine kiibhodhi inobviswa, yechigumi neimwe yechizvarwa Intel musimboti, uye Thunderbolt 11, zvichiita kuti ive yakakosha mutengo wekutanga weChromebook.
Yakanakisa Linux Laptop: Dell XPS 13 Yekuvandudza Yekutsikisa
✓ Dell inotsigira zviri pamutemo Linux pane yedu yatinofarira yakazara laptop
✓ Hunhu hwakanaka hwekuvaka, hupenyu hurefu hwebhatiri, uye kuita kwakanaka
✗ Unogona kuisa Linux pane yakachipa laptop, kana uri savvy
Unogona kuisa Linux pamalaptops mazhinji, asi vagadziri vazhinji havatsigire Linux pane yavo hardware. Kana iwe ukatora isina kurongeka laptop uye woisa Linux pairi, unogona kuramba uchibata nematambudziko emutyairi wehardware.
Isu tinokurudzira kuwana laptop inotsigira zviri pamutemo Linux. Dell anopa a Dell XPS 13 Yekuvandudza Yekutsikisa modhi inouya neLinux. Iyi ishanduro ye yedu yaunofarira laptop yakazara, asi modhi iyi inouya neLinux. Asi Dell haana kungokanda Ubuntu pane chero yekare laptop ndokuidaidza kuti zuva.
Dell anotsigira zviri pamutemo Linux pane iyi hardware, saka iwe unoziva kuti zvese zviri kuenda chaizvo kushanda nemazvo. Kunyangwe iwe uchitsvaga yekuvandudza sisitimu yeLinux programming kana iwe uchingoda yakavhurika-sosi yekushandisa system, iyi ndiyo hardware yatinokurudzira.
Kana iwe uchida kushandisa mari yakawanda kune imwe premium chiitiko, Lenovo inopawo iyo Linux edition yayo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 laptop. Ndizvo yedu yatinofarira laptop yebhizinesi, saka zvakanakisa kuona kuti vashandisi veLinux vane sarudzo dzepremium laptops nerutsigiro rwepamutemo rweLinux masisitimu anoshanda.
Yakanakisa Laptop yeLinux
Dell XPS 13 Yekuvandudza Yekutsikisa
Malaptop mazhinji anogona kuve neLinux yakaiswa paari, asi mashoma anovakwa aine sisitimu yekushandisa mupfungwa. Iyi vhezheni yesarudzo yedu yakanakisa yakagadzirira Linux, uye ese mahardware achashanda nemazvo.
Iyo Yakanakisa Linux Laptops ye2022
Yakanakisa Linux Laptop Yese
Yakanakisa Budget Linux Laptop
Yakanakisa Premium Linux Laptop
FungaPad X1 Carbon Gen 9 Ine Linux
Yakanakisa Linux Laptop yeGamers
Iyo XPS 13 (9310) ndiyo yakanakisa Dell laptop yaunogona kutenga izvozvi
Akanakisa malaptops ehurongwa muna 2022